उत्तम र पातलीसँग दुई घण्टा मार्टिनेजमा/ हरिहर र प्रिसकिलाको जस्तो गहिरो प्रेम चाही मेरो एल्वममा छैन – उत्तम कार्की – Durbin Nepal News
उत्तम र पातलीसँग दुई घण्टा मार्टिनेजमा/ हरिहर र प्रिसकिलाको जस्तो गहिरो प्रेम चाही मेरो एल्वममा छैन – उत्तम कार्की
दूरबिन नेपाल ६ माघ २०७५, आईतवार २१:५३
शुक्रवार बिहानै सानफ्रानसिस्कोको उत्तर पूर्विभाग वालनटक्रिकमा पुग्नु पर्ने थियो । डम्म हुस्सु लागेको बिहान । ग्रिनफिल्डबाट १ सय ६० माइलको यात्रा । गाडिको लाइट हुस्सुमा ठोकिएर तिरिमिरी । सडक मार्गका व्यवधानसँग जुधाउँदै गाडिलाई दौडाए । मन भने भजनसँग भक्ति मार्गमा निश्फिक्रि दौडिरहेको थियो । साढे दुई घण्टा बितेको पत्तै भएन । वालनटक्रिक पुगेको एक घण्टामा काम सकियो । हामी त्यसपछि सोझै उत्तमकी पातलीको किचेन तर्फ हानियौँ । मार्टिनेज पुग्दा किचेनमा उत्तम कार्की र पातली अर्थात् लक्ष्मी कार्की दुवै प्रफुल्ल मुन्द्रामा थिए ।
“हैट ! कसरी आइपुगे आज गाउँले भाइको जोडी ?” उत्तमले सधैँ झैँ हास्तै सोधे । पातलीले थपिन “जाडो छ औधी, चिया बनाए है ।” हामीले टाउको हल्लायौँ । उत्तम कोठा भित्र छिरे । एक प्लेट फलफुलको सिद्रा लिएर आए । भर्खरै युरोप भ्रमणबाट आएका उत्तमले ल्याएको सिद्रा मिठो मान्दै खायौँ हामीले ।
पातलीले भनिन् “हरिहर दाहालको मिसेसको अप्रेसन भएछ भेट्न जान पाइएको छैन ।”
उत्तमले हतारिँदै भने “आज म जाँदै छु । लक्ष्मी खरेलले फोन गरेकी थिइन आज सँगै जार्यौ भनेर । आज दिउसो पुग्छु होला ।”
पातलीले भनिन “हरिहर दाहालले कति धेरै माया गर्छन् हो बुढीलाई , फेसबुकमा नेहाकी आमा भनेर धेरै मायालु भावमा लेखिरहेका हुन्छन् ।”
उत्तमले थपे “हो त । प्रेसकिलाले पनि नेहाका बाबा भनेर कस्तो मिठो लेख्छिन् ।”
पातलीले जिज्ञासा राखिन “नेहाकी आमाले आफै लेख्छिन् की हरिहर दाहालले मिलाइदिन्छन् ?”
किरणले भनिन “भाउजू नेपालमा शिक्षिका हुनुहुन्थ्यो रे । भाषामा राम्रो दख्खलता छ जस्तो छ । राम्रोसँग मिलाएर लेखिरहनु भएको हुन्छ । सबै सधैँ त मिलाउन संझव नै हुँदैन न नि ।”
अव तपाइहरू दुइजनाले पनि थाल्नु प¥यो ।
उत्तमले हास्तै भने “हैट ! मलाइ त नेपालीमा त्यसरी भाति पु¥याएर लेख्न आउँदैन ।”
मैले भने “बुढीलाई त्यतिकै माया गर्न न त आउँछ होला नि ?”
हाँसोपछि लामो सास तुन्दै उत्तमले भने “आउँछ आउँछ ।”
पातलीले खै भन्दै थोरै ठुस्कुए जसरी टाउको घुमाइन ।
त्यति कुरा भइसक्दा पनि उत्तमले कुनै गीति एलबमको कुरै गरेनन् । एक साता पछि उत्तमले सप्राइज म्यासेज पठाए । “गाउन त खासै जानेको छैन तर मेरो गीति एलबम निस्कियो पातली ।
उत्तमले पनि आफ्नी श्रीमतीलाई हरिहर दाहालले जत्तिकै माया गर्छु भनेर एलबम नै निकाली दिए ।
सानफ्रानसिस्को बे एरियामा आयोजना हुने सभा सम्मेलन, भेटघाट र भोज भतेरहरूमा उत्तम कार्की देखिनासाथ धेरैले आज रमाइलो हुन्छ भन्ने अनुमान लगाइहाल्छन् । उनी रमाइलो माहौल पाउनसाथ गाउन पछि पर्दैनन् । कतिपयले उनलाई ‘फङसन गायक’ पनि भन्छन् । सानफ्रानसिस्को एरियामा आउने राष्ट्रिय स्तरका गायकसँग पनि उनले गीत गाएका छन् । कहिले काहीँ गाउने शौख र रहरमा नै गीति एलबम निस्किएको कार्की बताउँछन् ।
६ माघ २०७५, आईतवार २१:५३ मा प्रकाशित